Nepali Christian Bible Study Resources - भाइ यूसेफ नदरखनीको दोस्रो पत्र
» इसाई जीवन » सतावट » भाइ यूसेफ नदरखनीको दोस्रो पत्र
धेरैजना मानिसहरू येशूलाई पुस्तौं-पुस्तौं अनुसरन गरिनलाई एक अद्वित्तीय नमुनाको रूपमा उहाँको सराहना गर्छन् अनि धेरैजना मानिसहरू उहाँजस्तै हुने इच्छा गर्छन्। येशू सराहना गरिनलाई होइन तर पछ्याउनलाई एउटा सिद्ध नमुना दिनलाई आउनुभयो। यदि हामी उहाँजस्तै हुन चाहन्छौं भने हामीले पत्रुसले जस्तै विश्वासको पाइला चाल्नुपर्छ। जब ती प्रेरितले आफ्ना प्रभुलाई भयङ्करसित विचलित त्यस समुद्रमाथि हिँडिरहेका देखे, उनले उहाँकहाँ आउनलाई अनुमति मागे। येशूले भन्नुभयो: "आऊ!"
प्रभुलाई पछ्याउन इच्छुक बन्ने हरेकले कुनै न कुनै तवरले हेराइमा उक्त जोखिमपूर्ण आज्ञालाई सुनेको हुनुपर्छ: "आऊ!" एउटा यस्तो आज्ञा जसले विश्वासको कदमको अपेक्षा गर्दछ, जसलाई कहिलेकाहिँ "विश्वासको हामफलाइ" भनेर भन्ने गरिन्छ। पवित्र शास्त्रहरूबाट यो स्पष्ट छ, जुन कुरा हामी देख्‍न सक्छौं त्यो विश्वास होइन, किनभने बाइबलीय विश्वासलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ: "अब विश्वासचाहिँ आशा गरिएका वस्तुहरूको निश्चयता र नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण हो।" परमेश्वरको सामर्थ्यको अनुभव गर्ने हो भने हामीले "बाबजुद" निर्णय गर्नुपर्छ। तर हामीले यो याद गर्नुपर्छ कि सबै कुरा परमेश्वरको वचनअनुसार गरिनुपर्छ। उनले डुङ्गालाई छोडेर जाने निर्णय गरेकाले पत्रुसले पानीमा हिँड्ने सम्भावनालाई अनुभव गरेका होइनन् तर वचनको कारणले हो, प्रभुको आज्ञाको कारणले हो।
परमेश्वरको वचनले हामीलाई "सङ्कष्ट" र उहाँका नामका निम्ति अनादर सहने कामको "अपेक्षा गर्नुपर्छ" भनेर बताउँदछ। हाम्रो ख्रीष्टियन स्वीकार ग्रहणयोग्य छैन यदि हामीले यस कुरालाई बेवास्ता गर्दछौं, यदि हामीले हाम्रा सङ्कष्टहरूमा प्रभुको धैर्यतालाई प्रकट गर्दैनौं। यस कुरालाई बेवास्ता गर्ने जोकोही त्यस दिनमा शर्माउनेछ।
"उहाँले आफ्नो शरीरमा हुनुभएको दिनहरूमा बेसरी कराई-कराई र आँसु बहाई-बहाई आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई प्रार्थना र विन्तीहरू चढाउनुभयो; अनि उहाँको भक्ति-भयको कारणले गर्दा उहाँको सुनियो; उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो, र पनि आफूले दुःख भोगेका कुराहरूबाट उहाँले आज्ञापालन गर्न सिक्नुभयो।" हिब्रू ५:७-८
कलवरीमा हाम्रा प्रभुका दुःखहरूलाई व्यक्त गर्न "एली, एली, लामा सबकथनी?" को चित्कार पर्य‍ाप्‍त छ। आपत्तिको उक्त चित्कारको पछाडि, हामीले त्यहाँ रहेको ठूलो विश्वासलाई औंल्याउन सक्छौं जसले उहाँलाई पिताको इच्छालाई स्वीकार गर्न डोर्‍याएको थियो। हो, परमेश्वरले "आफ्नो पवित्र जनलाई सड्न दिनुहुनेछैन" भन्ने कुरा उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। मृत्युको सामर्थ्यको पारी प्रभुले बौरिउठाइको जयवन्त सामर्थ्य देख्‍नुभयो।
« भाइ यूसेफ नदरखनीको पत्र
उत्तर कोरियामा प्रचारकको गिरफ्तारी »